Global Voices teny Malagasy » Mpanao gazety libaney miatrika fitsarana noho ny fitantarana fihoaram-pahefana lazaina fa natao tamin’ny mpiasa mpifindramonina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Desambra 2018 16:04 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sendikà, Zon'olombelona
Nampangain ‘i Lensa Lelisa ho nanararao-pahefana taminy ny mpampiasa azy, izay namelona orinasan-damaody avolenta, tamin'ny marsa 2018. Niezaka mafy izy ny handositra, ka nitsambikina avy eny an-davarangan'ny rihana faharoa, ka nahatapaka ny tongony. Notatarainy taty aoriana tao amin'ny lahatsary  ny zava-niainany ka niely fatratra an-tserasera.
Rehefa niala tao amin'ny hopitaly izy dia nentin'ny mpampiasa azy nody na dia teo aza ny filazana ho fisian'ny fihoara-pahefana. Nivoaka tamin'ny fahitalavitra i Lelisa taty aoriana ka nihemotra tamin'ny fitantarana natao teo aloha  ary nilaza fa tsy nahy no nianjerany.
Mafy asa sy miaina ao anaty fepetra sarotra ny mpiasa an-trano ao Libanona eo ambany rafitra “kafala” (fanohanana ara-bola). Rafitra iray mamela  ireo mpanohana ara-bola (orinasa na olon-tsotra) hanana “fahefana ara-pitsarana” hifehezana ny mpiasa ka mahatonga ireo mpiasa ireo ho mora lasibatry ny fihoara-pahefana. Raha tsy misy ny fanomezan-dalana avy amin'ny mpanohana ara-bola, dia tsy afa-miova asa na miala amin'ny asany na mandao ny firennea ny mpiasa. Nilaza ny Fikambanana Iraisampirenena momba ny Asa , sampan-draharaha iray ao amin'ny Firenena Mikambana fa mahamora lasibatra ny mpiasa hanao asa an-terivozona ity rafitra ity.
Rehefa noteren'ny manampahefana dia noesorin'ny gazety hiala tao amin'ny tranonkala taty aoriana ny lahatsoratra, na dia mbola hita  ao amin'ny bilaogin'i Azhari aza izany. Mbola hita ao amin'ny tranonkalan'ny DailyStar ihany ny lahatsoratra iray miresaka ilay hetsi-panoherana .
Natao famotorana teo anoloan'ilay sampandraharaha malazan'ny heloka an-tserasera ao Libanona i Azhari tamin'ny volana jona. Rehefa nifampiresaka tamin'i Azhari momba ilay fizotran'ny fitsarana aho dia notantarainy ny fomba niampangan'ny mpanao famotorana iray azy ho “mitongilana” ao amin'ny tantara. Nangatahan'ny manampahefana taminy ny hanesorany ny siokany mifandraika amin'ny raharaha Lelisa, tamin'nyf ilazana fa voaporofo tamin'ny famotorana ny maha-tsy manantsiny ny mpampiasa ilay vehivavy. Nalain'ny  polisy ihany koa ny torohay tsy tokony hivoaka hita tao amin'ny findainy.
Notakian'ny sampandraharaha ihany koa ny hanasoniavany  fampanantenana tsy hiresaka intsony momba ilay raharaha, saingy nolaviny izany.
Natsangana tamin'ny taona 2006 hanamafisana ny fahafahan'ny fanjakana libaney eo amin'ny lafiny fiarovana an-tserasera amin'izao fvanim-potoanan'ny nomerika izao, ny sampandraharahan'ny ady amin'ny heloka an-tserasera no lalambe ahafahana manao famotorana ireo mpanao gazety, mpikatroka ary bilaogera amin'ny famoahana antserasera  taon-dry zareo.
Tamin'ny voalohany aogositra ny Social Media Exchange, fifandaminana iray ao an-toerana tsy miankina amin'ny fanjakana izay miasa amin'ny politikan'ny aterineto, nandrakitra  raharahan'olona 16 farafahakeliny nantsoina hohadihadiana tamin'ny lahatsoratra an-tserasera nandritra ity taona 2018 ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/14/131832/
 nihemotra tamin'ny fitantarana natao teo aloha: https://globalvoices.org/2018/04/12/forced-onto-live-tv-with-her-employer-a-migrant-domestic-worker-in-lebanon-recants-claims-of-abuse/
 Fikambanana Iraisampirenena momba ny Asa: https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_553086/lang--en/index.htm
 ny hanasoniavany: https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2018/11/29/journalists-in-lebanon-fined-and-beaten-amid-crackdown